रामचन्द्र पौडेलको टिम घोषणा आज, महामन्त्रीको उम्मेदवार शशांक – Radio Bagmati 91.5 MHZ
रामचन्द्र पौडेलको टिम घोषणा आज, महामन्त्रीको उम्मेदवार शशांक
१९ फागुन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडलले बुधबार औपचारिक
उम्मेदवारीको घोषणा गर्ने भएका छन् । उनले आफ्नो टीम सार्वजनिक गर्नेछन् ।
पौडेल समूहले अपराहृन ४ बजे पार्टी कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन राखेको छ । ‘सहमतिको प्रयास गर्ने र नभएपछि टिम घोषणा गर्ने भन्ने भएको छ’ पौडेल निकट मानिएका काभ्रे जिल्ला सभापति मधु आचार्यले भने ।
पौडेलको टीमबाट महामन्त्रीमा शशांक कोइराला उम्मेदवार हुनेछन् भने कोषाध्यक्ष टुंगो लागेको छैन । कोषाध्यक्ष मधेसी समुदायबाट उम्मेदवार बनाउने तयारी छ । यसमा पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका भतिजी किरण यादवको सम्भावना प्रवल रहेको स्रोतले बताएको छ ।
पद्मनारायण चौधरी, फर्मुल्लाह मन्सुरको नाम पनि चर्चामा छ । अर्का दावेदार पूर्व राष्ट्रपति यादवका छोरा चन्द्र मोहन यादव भने महाधिवेशन प्रतिनिधि नै नहुने खतरा बढेको छ । उनको क्षेत्र धनुषा ५ मा अनिश्चितकालका लागि अधिवेशन स्थगित भएको छ ।
पौडेल समूहको उपसभापतिका रुपमा प्रकाशमान सिंहलाई हेरिएको छ । यो मनोनित पद भएकाले अहिले घोषणा हुनेछैन । यस्तै मनोनित महामन्त्रीमा पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतलाई ल्याउने समझदारी भएको छ । तर, महतले सभापति लड्छु भन्न छाडेका छैनन् ।
Previous Previous post: बागमती नदी किनारमा गिद्धको बथान